Mahitsy / Chest
Ventilate / voasakantsakan'ny
Vata fampangatsiahana / Chiller
DUSUNG refrigeration no lehibe indrindra mpanamboatra nosy vata fampangatsiahana ao Shina.
Manana mahaleotena R & D andrim-panjakana, 15% ny injeniera dia manana ny mari-pahaizana doctorat sy ny diplaoma. 3 ~ 5 vokatra vaovao / taona, nanao mihoatra ny 40.000 pcs ara-barotra tamin'ny 2017 vata fampangatsiahana.
8 andian-dahatsoratra, 53 sokajy, 239 karazana vokatra, fa ny fivarotana lehibe, toeram-pivarotana, tsena trondro, gilasy sy ny fanaova-mofo tsena ... sakafo antsinjarany endrika hafa.
40000M² orinasa, 13pcs lehibe metaly fitaovana, 2 lehibe tamin'ny laser fanapahana milina, 33sets mandroatra lasitra, 11 karazana ao aminy no hydraulic lasitra, sivy fivoriambe andalana, ho feno mampiasa ny 3 vaovao vokatra fikarohana sy ny kalitao nandinika laboratoara, DUSUNG refrigeration mahazo ny ISO9001 ISO14001 rafitra fanamarinana kalitao, dia afaka hanatitra ny vokatra avo lenta ny mpanjifa rehetra manerana izao tontolo izao.
distrika, Qingdao, CHINE
© Copyright - 2015-2022: Zo rehetra voatokana.